LXDE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
LXDE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Lxde bụ ìhè na ngwa ngwa Ebe obibi Desktọpụ, dị ka XFCE y MGBE. Gbanye Lxde ọ bụghị ọtụtụ ozi dị oke ka nke ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, anyị ikpeazụ post ezipụta banyere Lxde, ọ bụ ihe karịrị 1 afọ gara aga, na otu esi eme otu ndabere ya.
Nke a bụ eziokwu n'ihi na ọ na-adịkarị ole na ole Nkesa GNU / Linux nke gunyere ya dika Ndabere Desktọpụ Environment. Ya mere, n'ime akwụkwọ a, anyị ga-elekwasị anya karịsịa Kedu ihe ọ bụ? y Kedu ka esi etinye?. N'ezie, mesie ike ihe dị ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster. Nke bụkwa ugbu a ihe ndabere maka Mwepụ MX-Linux 19 (ujo ojoo).
Na-ekwu maka ozi ndị gọọmentị, a pụrụ igosipụta ihe ndị a:
"LXDE, kedu ihe ọ pụtara Fechaa X11 Desktọpụ Environment, ọ bụ gburugburu ebe dị mfe desktọọpụ ma dị fechaa. Ezubere ya ka ọ bụrụ enyi na enyi ma fechaa ma na-ejikwa ojiji akụ ala. LXDE na-eji obere RAM na CPU, ebe ọ bụ desktọọpụ-ọgaranya. N'adịghị ka desktọọpụ ndị ọzọ jikọtara ọnụ, LXDE na-agba mbọ ịdị n'ụdị, ka enwere ike iji akụrụngwa nke ọ bụla jiri aka ya rụọ ọrụ na ịdabere na ya. Nke a na - eme ka LXDE bute nkesa na nyiwe dị iche iche. ”. Official LXDE Wiki
1 Ihe niile gbasara LXDE
1.3.4 Omume ma ọ bụ mmeju
Ihe niile gbasara LXDE
Lxde wepụtara otu n'afọ 2006 nke onye sayensị sayensị nke Taiwan Hong Jen Yee Mgbe emechara PCManFM, mbụ desktọọpụ modul. Mgbe ahụ desktọọpụ zuru nke Lxde, na ebumnuche nke ijere mmepe nke obere ume na akụ na-ewe nkesa.
Ugbu a na-aga maka 0.8 mbipute (anụ).
Lxde dị site na ụlọ ọrụ gọọmentị n'ọtụtụ GNU / Linux Distros, dika: DEBIAN, Ubuntu na Fedora. Fọdụ na-ebute ya na ndabara mgbe ha lekwasịrị anya na ndị otu na-eri obere akụ.
El usoro okike nwa afọ na- Lxde O nwere otutu mmemme, ihe ndia bu ihe ama ama ma obu amara: PCManFM (Njikwa faili), Leafpad (Editọ ederede), GPicView (Ihe onyonyo onyonyo), na otutu ndi ozo.
Lxde emere ya GTK + 2. Ma o nwere ihe yiri ya a na-akpọ NXT, nke anyị ga-ekwu maka ya na ọkwa ọzọ.
Cheta na: NXT bụ Ebe obibi Desktọpụ ugbu a rụrụ site Hong Jen Yee na obodo nke ndị mmepe, mana ahapụbeghị mmepe nke Lxdedika ha na-anwa iwebata ya GTK + 3 maka ndakọrịta na gburugburu Gnome3. N'ihi ya, olee otu ha si ebu LXQT na QT5 na KDE Frameworks 5 iji nweta ndakọrịta na KDE Plasma gburugburu ebe obibi.
Ọ bụ Desktop Environment ngwa ngwa na obere oriri. Ike ya dabere na e mere ka ọ bụrụ fechaa, jiri obere CPU na RAM karịa ndị ọzọ, ma rite uru ya n'iji arụ ọrụ dị ala.
A na-elekọta ya site na a mba mmepe obodo na-arụ ọrụ ugbu a iji nọgide na-enwe nkwụsi ike na ịdị adị nke gburugburu ebe obibi ma na-emezu mbata ọ ga-ekwe omume GTK + 3.
Abịa na a anya-adọrọ adọrọ interface mana iji omenaala.
O nwere akụkụ ndị dị mma dịka nkwado ọtụtụ asụsụ, ihe e kere eke nke hotkeys ọkọlọtọ na ọrụ ndị ọzọ dị ka taabụ faịlụ nchọgharị.
Ugbu a Lxde na-akwado ya Linux. Ọ bụ ezie na ọ nwalere na FreeBSD. N'ihi ya, ọ na-ihu ọma na-akwado ihe fọrọ nke nta ọ bụla usoro dabere na Unix.
Ọ dabere na desktọọpụ ọ bụla, ya bụ, ihe mejupụtara ya enwere ike iji onwe ya rụọ ọrụ na Desktọpụ Environment n'onwe ya Lxde.
Nhazi ya bu gbanwee ụkpụrụ na-esite na ominira .ktop.org.
O nweghi njikwa window nke ya, ma a na-ejikarị ya eme ihe Openbox.
Isi ya ka dị GTK2 ma o nwere ihe mere version Lxde dabere na GTK + 3, kere site na nkwado site na otu onye ọrụ nke Arch (Nkechi3).
Ọ nọ na mmepe zuru oke ma erubeghị nke gị nke mbụ tozuru okè (1.0) ma obodo ya na-eto kwa ụbọchị n'ihi oke uru ya ndị kwụsiri ike.
Na-atụ aro maka ndị ọrụ nwere ọkwa dị elu karịa nkịtị, ebe ọ bụ na ihe niile adịchaghị nso, na ịpịpụta ikike ya chọrọ a ezigbo iwu nke Linux.
para mụtakwuo ị nwere ike ịga leta ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na nke onye kere ya Distro:
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke LXDE Project
Ebe ị nwere ike ịnweta ndị ọrụ bara uru, dị ka a Blog, Wiki na Nzukọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Njikọ ndị a dịkwa iji gbakwunye ozi na Lxde:
Họrọ LXDE Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Cheta na: I nwekwara ike wụnye a Desktọpụ Environment dabere na LXDE mfe site dochie ngwugwu lxde site lxde-core.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ Ebe obibi Desktọpụ Lxde, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Nbanye Manager ldxe-session.
Chetakwa, nke a bụ ise post nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Ndị gara aga dị ihe dị ka GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda y MGBE. Ezie na nke ikpeazu gasi ihe dika NXT.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «LXDE», nke a na-ewere dị ka otu n'ime ihe kachasị dị mfe ma dị mfe, dịka XFCE, na omenaala omenaala na obere na incipient nke ngwa nke ndi obodo, n’ime uwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LXDE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Obinna 88 dijo
Enwere m Debian 10 na LXDE na XFCE arụnyere, ọ na-eme m na ụdị ọhụrụ nke WPS Office 11.1.0.9080 ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anaghị amalite na LXDE, mana ọ bụrụ na XFCE, ụdị nke gara aga rụrụ ọrụ na LXDE. Onwere onye mara maka nsogbu a na otu esi egbo ya?
LXQT: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?